Ghost - Isiteji sokubloga esithakazelisayo. | Kusuka kuLinux
Ghost - Isiteji sokubloga esithakazelisayo.
IGhost iyipulatifomu enikezelwe entweni eyodwa nje: Ukushicilela. Idizayinwe kahle kakhulu, yenza ngezifiso ngokuphelele futhi ingumthombo ovulekile ngokuphelele. Ingaphansi kwelayisense ye-MIT. IGhost ikuvumela ukuthi ubhale futhi ushicilele ibhulogi yakho, ikunikeze amathuluzi okwenza kube lula futhi kube mnandi ukukwenza. Ilula, yinhle, futhi yakhelwe ngendlela ongachitha ngayo isikhathi esincane udlala ngokwenza ibhulogi nesikhathi esengeziwe sokubhuloga.
1 Indaba kuze kube manje
Indaba kuze kube manje
Ekupheleni kuka-2012, uJohn O'Nolan wahlanganisa iposi namafreyimu athile womqondo mayelana nombono wakhe wesikhulumi esisha sokubhuloga. Ngemuva kweminyaka eminingi ekhungathekile ebhulogi yokwakha izixazululo ezikhona, wabhala umqondo wenkundla yezinganekwane eyayizophinda ibe ngokushicilela ku-inthanethi kunokwakha amakhasi wewebhu ayinkimbinkimbi. Ngemuva kokubukwa kwamakhasi ayizinkulungwane ezingamakhulu ambalwa esikhathini esiyizinsuku ezimbalwa, wabona ukuthi abanye abantu bafuna into efanayo.
Ezinyangeni eziyisithupha kamuva, ngemuva kokusebenza kanzima amahora amaningi, uGhost wembulelwa umphakathi okokuqala ngqa kuKickstarter. Kwaqoqwa imali engaphezulu kwama- $ 100.000 emahoreni angama-48 okuqala oxhaso, futhi yaliphinda kathathu lelo nani esikhathini salo sezimali sezinsuku ezingama-29. Ngemuva kokuletha uHannah Wolfe njengokuhola kokuthuthuka kwephrojekthi, uhlobo lweGhost luthole ukunakwa kakhulu kunakuqala, njengoba abantu ekugcineni babona ukuqina kwesenzo.
Ngo-Okthoba 14, 2013 - Ghost 0.3 Kerouac ikhishwe emhlabeni. IGhost manje isivulekele ngokuphelele futhi iyatholakala kubo bonke, futhi isentuthukweni esebenzayo. Imininingwane yalokho okuzolandela ingatholakala kumephu yomgwaqo womphakathi.
Ukufakwa kweWindows neLinux "NgeSpanish" kungatholakala ku- I-Eliotime ™ ebhalwe yimina. (Impela uma ngikushicilela lapha, ama-fanboys eza ukungiklolodela ngeposi engilenzayo ngomzamo nangesikhathi sami ngoba nje ngishicilela okuthile kweWindows, kubo ngibatshela ukuthi kunabantu abangakwazi ukusebenzisa i-Linux ngezizathu ezithile ukuthi bazi mayelana.
Futhi kulabo abalinde ingxenye yesithathu engangiyiyona engcono kunazo zonke, ngiyazisola ukusho ukuthi abanye abantu bakwazile ukungivimba ukuthi ngiyishicilele kanye neminye imikhonzo eyenzelwe wena nalabo abangazange bagxeke kabi okuthunyelwe =). Uma ukonile ngalokhu, ngiyaxolisa ngobuqotho. Ngiyazi ukuthi akuyona indawo efanele yokubeka lokhu kepha ngicabanga ukuthi kufanele ngikulungise.)
Thumela lapho kuchazwa khona ukufakwa.
Sanibonani, Merry Christmas wonke umuntu futhi njenge-yoyo (Umuntu engimthandayo) uthi:
Happy December kuwo wonke umuntu futhi kwangathi inhlanhla ingaba nawe.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Ghost - Isiteji sokubloga esithakazelisayo.
Manje konke sekuyiNode.js…. uff izimfashini.
Awunakumsusa ukufaneleka kwakhe 😉
Kungani isihogo ngifuna ukuba naso endaweni? Ngiyifuna ku-inthanethi -_-
Enye into, hhayi konke ukusingathwa okusekela ama-nodejs okwamanje, futhi ukubloga njengendlela yokuzilibazisa akudingekile ukuthi usebenzise imali ekubanjweni okukhethekile, ngaleyo ndlela i-tumblr, i-blogger ne-wordpress zisengaphambili kakhulu
Uyifaka ku-VPS futhi yilokho kuphela! ¬_¬
Uxolo ngokungazi, kepha yini iVPS?
I-VPS = I-Virtual Private Server noma i-Virtual Private Server. Yiseva ebonakalayo eyenziwe ngaphakathi kwezinto ezibonakalayo lapho izinsiza zayo ziphathwa khona ngokusebenzisa isikhombimsebenzisi sewebhu njengeCanel, ngokwesibonelo.
Ungasebenzisa futhi izinsiza ezinjengeHeroku, Openshift, Nodejitsu, C9.io, njll.
E-github kunezinqolobane eziningi zokufakwa kulezi zingxenyekazi.
Ake sizame ukubona ukuthi kusebenza kanjani: D!
Ngethemba nokuthi bazokhipha ipulatifomu ukuze bakwazi ukudala amabhulogi ngaleyo CMS ngendlela enamandla kanye ne-Ghost subdomain, efana ne-WordPress.com.
Eqinisweni, ikhona, kepha le sevisi iyakhokhwa ...
Sikufisela amaholide amahle! Jabulela unyaka omusha